AFG Caravelle Help nceda
umbuzo AFG Caravelle Help nceda
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #568 by calypso999
Ndandidla ukuthanda eziphaphazelayo i AFG Caravelle e FS9.
Ndafika kulo lonke isayithi yakho nenala i Caravelle. Hayi ke, mna uyilayishe nefakiweyo kwi FSX Steam apho eziliqela moya leqela (PT Tu-154B2, DC-9, njalo njalo).
Ufakelo waya kakuhle yaye kungekudala kwafuneka ukuba eziqhelekileyo panel endala Caravelle zilayishwe.
Ngokomthetho iingxaki ezimbini nakuba.
Iinjini bayala ukuqala kakuhle. Baya kufikelela i RPM ethile yaye xa uvula isiqalo mbobo i ingadumeli hlala khona. Akukho ekuqaleni.
Andikwazi ukufumana beziya am emsebenzini. Akukho intshukumo phezu beziya igeyiji kwaye akukho ukuhamba enezinto ngokwabo.
Bendiya kuba nombulelo ngokwenene ukuze naluphi uncedo / iingcebiso.
Uziva ngathi ingxaki panel / gauge kum. Nabani na ongomnye ku Steam ukuba amava efanayo please25?
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-10 inyanga edlulileyo calypso999.
Ixesha ukwenza page: 0.200 imizuzwana